SERASERA.ORG : MANANDRATRA NY TENY MALAGASY AMIN’NY ATERINETO – Blaogin'i Voniary
Ny serasera.org no anisan’ny lohany amin’ireo takelaka mivoy ny teny Malagasy, noforonina Malagasy ho an’ny Malagasy. Vohikala fa tsy tranonkala no fiantso azy satria maro ny tolotra sy pejy hita ao. Ny bizina, ny ohabolana, ny baiboly, eny hatramin’ny tambazotra sosialy aza dia voarakitra ao anatin’io fitaovan-tserasera goavana mampifandray ny Malagasy io.
Tamin’ny 03 Oktobra 1999 no natsangana ny Serasera Malagasy mba hampifandraisana ireo Malgasy am-pielezana. Hery Eugène, mpianatra malagasy tany Nairobi Kenya no tompon-kevitra tamin’izany Nahatsapa manko izy fa tandra vadin-koditry ny olombelona ny serasera, ny faniriana fiombonana sy ny fitadiavana fifandraisana. eGroups, izay tolotra maimaim-poana afaka ifanakalozana vondron’olona tamin’ny aterineto, no nampiasaina tamin’ny voalohany. Taty aoriana voa nivoatra ho tranonkala izany ka nomena ny anarana serasera.org. Ny fanamby napetraky ny mpamorona moa dia ny hanandratana ny teny Malagasy. Noho izany, amin’ny teny Malagasy ranoray ny takelaka sy ny rindran’asa ary tolotra maro isan-karazany ao amin’ny serasera.org. Na dia nandalo sedra maro aza i Hery Eugène sy ny tariny hatrany am-piandohana dia tsy nitsahatra nikiry hatrany izy ireo satria zava-dehibe loatra ny fampiroboroboana ny teny Malagasy eo anivon’ity fitaovana natolotry ny teknolojia vaovao ity.
Ireto tolotry ny serasera.org
Takelaka maro no hita ao amin’ny vohikala serasera.org :
Namana: tambazotra sosialy toy ny Facebook, ivondronan’ny samy Malagasy
KlipGasy : takelaka misy horonan-kira an-tsary. Jereo ao ireo Klip vaovao vao nivoaka
Tahiry : Ahitanao lahatsoratra maro momba ny fampianarana, tantara sy ny maro hafa
Lalao : natao ilalaovana ary afahanao mifanandrina amin’ireo namanao mpikambana
Infogasy : misy tahirin-kevitra maro mikasika ny tontolon’ny informatika
Bazarbe : toerana iantsenana sy ivarotana entana Malagasy
RadioVazoGasy : onjam-peo an-jotra, angataho ao izay hira tianao ary mandefasa hafatra
Baiboly : Ahitanao Baiboly Katolika
Ireto takelaka manaraka ireto dia malalaka ny fampidirana tononkalo, ohabolana sy ny sisa ho an’ny mpikambana : Tononkalo, Tononkira, Antsary,
Azonao atao ny miresaka mivantana amin’ny alalan’ny takelaka Karajia ary mandray anjara amin’ny Forum na Dinika.
Raha mpanoratra, manan-talenta na manan-kambara ianao dia misokatra ho anao ny blaogy.com sy ny blaogy.org. Ny Wikianja koa dia ahitanao takelaka miresaka lohahevitra maro isan-karazany ary azo ovaina ny votoatiny.
Tohano ny vita malagasy
Mendri-dera tokoa ny ezaka vitan’ny mpiandraikitra ity vohikala Malagasy ity. Betsaka ny dingana efa vitany amin’ny fitarihana ny Malagasy hivondrona sy hiserasera ao anaty sehatra tena Malagasy. Tsy mora anefa ny manao zavatra ary ny tao-trano tsy efan’ny irery. Noho izany, mila fanohanana avy amiko, aminao sy amintsika Malagasy rehetra ny serasera.org. Fanohanana lehibe sady goavana ny fitsidihanao ny takelaka sy ny fidiranao ho mpikambana ao. Raha tsy misy ny mpikambana dia ho vohitra haolo ihany ny serasera.org. Maimaim-poana avokoa ny tolotra omena ao ary mahaleo tena io vohikala io. Ny dokam-barotra no loharanom-bola miampy ny fanampian’ireo malala tànana. Betsaka anefa ny fandaniana tsy maintsy atao raha tsy ilaza ny fanofana lohamilina fotsiny aza. Koa manentana antsika anohana araka izay tratratsika.
Tsidiho ny pejy : https://www.facebook.com/seraseraorg/
Raha anolotra fanampiana ianao dia mandefasa mailaka ao amin’ny : doc.strange@wanadoo.fr
Fanagasiana, fandrosoana, maha-malagasy, Serasera Malagasy, teny malagasy, tranonkala malagasy